San Htun's Diary: BloodBank@HSA မှာ တစ်နေ့တာ
BloodBank@HSA မှာ တစ်နေ့တာ
"သွေးလှူ၍ အသက် ကယ်ပါ" ဆိုပြီ: ရောက်လာတဲ့ Forward Mail လေးတွေက သွေးလှူချင် စိတ်တွေ တဖွားဖွား ပေါ်ပေါက်လာအောင် စွမ်းဆောင်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ခါမှ သွေးမလှူဘူးလို့ တစ်ခါတော့ လှူဖူးတယ် ရှိအောင် အရမ်းအရမ်းကို လှူချင်မိပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ထက်သန်တဲ့စေတနာနဲ့၁၂ ယောက် ချီတက်သွားတာ ပေါင်ချိန် မပြည်လို့ ၊ သွေးမလှူခင် ၃ရက် အတွင်း ဆေးသောက်ထားလို့ ၊ ဟေမိုဂလိုဘင် ၁၂ အောက် နည်းလို့နဲ့၎ယောက်ပဲ လှူခွင့်ရခဲ့တယ်။ လှူခွင့်မကြုံတဲ့ အထဲမှာ စန်းထွန်းလည်း ပါတာပေါ့။ လှူခွင့်မကြုံတဲ့သူတွေက လှူခွင့်ကြုံတဲ့သူတွေကို အားကျတဲ့အကြည့်နဲ့ကြည့်ရင်း နောက်အကြိမ်ကျရင် လှူခွင့်ရအောင် ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ ပေါ့။
16 Feb 2011 Sunday930 am မှာ သွေးသွားလှူမယ် သိကတည်းက အမဲသားတွေ၊ ပဲပိစပ်၊ ပဲတွေကိုပဲ စားတော့တာပဲ။ သွေးမလှုခင် ၃ရက် အလိုတည်းက ပြက္ခဒိန်မှာ မှတ်ထားပြီး ဆေးမသောက်မိအောင် သတိထားနေတယ်။ အရင်ကဆို ဗိုက်လေးတင်းတာနဲ့အစာကြေဆေးပုလင်းကို လက်ကရောက်ပြီးသားပဲ။ သွေးလှူမယ့်နေ့ မတိုင်ခင်ညက စောစော အိပ်ယာဝင်တယ် ။ တော်ကြာ အိပ်ရေးမဝလို့ သွေးအားမပြည့်ရင် လှူခွင့်ရမှာမဟုတ် ။ မနက်တိုင်း သောက်နေတဲ့ ကော်ဖီကို မသောက်ဘဲ Mr.Bean က Soya Milk ကို သောက်ရတယ် ။ ဒါမှ သွေးအားပြည့်မှာလေ။
ဒီတခေါက်တော့ လူအင်အားနည်းတယ် မယဉ်စု၊အဲအဲ နဲ့စန်းထွန်း ၃ယောက်တည်း။ ပေါင်ချိန်၊သွေးအားတိုင်းတော့လည်း ၁၂ .၅။ အားလုံး အိုကေ။ ဒီတခေါက်တော့ ထူးထူးခြားခြား ၃ယောက်လုံး လှူခွင့် ကြုံတယ်။ ဒီနေ့မှာပဲ မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာ အဖွဲ့ အစည်းတွေကလည်း သွေးလာလှူကြတယ်။ စန်းထွန်းရဲ့vein က သေးလို့ စလုံးမက သွေးမထုတ်ချင်ဘူး မလှူနဲ့ပြန်ခိုင်းလိုက်တဲ့။ မြန်မာအန်တီကြီးက "သမီး သွေးကြောကြီးလာအောင် ဘောလုံးလေးကို ဖျစ်ပြီးကစားနေ သမီးသွေးကြောက သေးတော့ အပ်ထိုးလိုက်ရင် ပြားပြီး သွေးက နည်းနည်းပဲ စီးတယ် သွေးထုတ်ရတာ ကြာတယ် ခက်လို့ စလုံးမက မလုပ်ချင်ဘူး အန်တီ ကူညီမယ်" တဲ့။ သွေးထုတ်တာ ၅မိနစ်လောက်ပဲ ကြာတယ်။ ၄၅၀ ဂရမ်ရှိတယ့် ကိုယ့်ရဲ့ သွေးကို ကြည့်ပြီး ငါ့သွေးနဲ့သူများ အသက်ကယ်နိုင်ပြီလို့ ပီတိဖြစ်မိတယ် ။ ဒီသွေးတွေကို ၄၂ ရက်အတွင်း သုံးရတယ် သွေးတွေ အများကြီးလိုတယ်ဆိုတဲ့ အန်တီ့စကားကြောင့် နောက်၃လကြာရင် လာလှုဦးမယ်လို့ ။
မယဉ်စုနဲ့ အဲအဲ က မုန့်စားတဲ့နေရာမှာ စောင့်နေပြီမို့လို့ သိပ်မနားတော့ဘဲ သူတို့ ဆီကိုသွား။ ဓာတ်ပုံတွေ တစ်ယောက်တစ်လှည့်ရိုက် ။ အဲအဲက "အမ ရရဲ့ လား သမီး မုန့်သွားပေးရမလားတဲ့" ။ ကိုယ့်ဘာသာ မှာချင်တာနဲ့ကောင်တာမှာ Milk လို့ပြောပြီး မုန့်ရွေးမလို့ ခေါင်းငုံ့လိုက်တဲ.အချိန်မှာ မိုက်ကနဲဖြစ်ပြီး အိပ်မက်မက်သလို ဖြစ်သွားတယ်။ သတိရတဲ့အချိန်မှာ တစ်ယောက်ယောက်က ပွေ့ ဖက်ထားပြီ "မြန်မာနဲ့တူတယ်။ မြန်မာ ဟုတ်ပါတယ် ။ သွေးလှူတုန်းက စကားပြောတာ တွေ့လိုက်တယ် သတိရပြီလား" ဆိုတယ့်အသံတွေကို ကြားရပေမယ့် မျက်စိက ဖွင့်လို့ မရဘူး။ ထိုင်ခိုင်းကနေ တွန်းလှည်းပေါ် ပြောင်းတင်နေတာကိုလည်းသိပြီး တွန်းလှည်းပေါ်ရောက်မှ မျက်လုံးဖွင့်လို့ ရပြီး ချွေးတွေ ထွက်ပြီး ရေငတ်လာတယ်။ သွေးလှူတဲ့ခုံပေါ် တင်ပေးပြီး ခြေထောက်ကို ထောင်ထားတယ်။ ရေလာတိုက်တယ်။ မြန်မာဆရာဝန်လာပြီး "ဘယ်နားနာလဲတဲ့"။ ဒီတော့မှ ခေါင်းနာနေမှန်း သိတယ်။ မယဉ်စုတို့ က အဝေးမှာ ဝုန်းကနဲ အသံကြားလို့ လှည်.ကြည့်တော့မှ စန်းထွန်းမှန်း သိတာ။ ဘာနဲ့ ဆောင့်မိမှန်းကို မသိတာ။ CT Scan ရိုက်ရမယ် ဦးနှောက်မှာ သွေးယိုနေရင် မသိနိုင်ဘူး ဆေးရုံ သွားရမယ်တဲ့။ SGH ဝန်ထမ်းက ခေါင်းကိုလာစမ်းပြီး လာမေးပြန်ရော ။ ခေါင်းကို ဆောင့်မိတာကိုတောင် မသိတာ ဘာနဲ့ ဆောင့်မိမှန်လည်း မသိဘူး ကောင်တာက လူတွေကို သွားမေး သူတို့ ရှေ့မှာ လဲတာ။
အဲဒီအချိန်မှာပဲ အမြဲ ဖုန်းလာခဲတဲ့ဖုန်းက ထမြည်ပါရော။ မိစိမ့် "အမ အခုမှ အိပ်ယာနိုးတာလားတဲ့" ။ ကြည့်ပါဦး သူများကို ကာလနဂါးများ ထင်နေလား မသိ ။ ၁၂ နာရီပဲ ကျော်နေပြီ ။ "ဟဲ့ ငါ အခု သွေးလှူပြီး မူးလဲလို့ ခေါင်းဆောင့်မိတာ ဆေးရုံသွားမလို့ " ဆိုတော့ မိစိမ့်တို့ များ သူနဲ့ အစေးမကပ်တဲ့ အကိုကို ပစ်ပေးပြီး စန်းထွန်းရဲ့ မောင်အချောလေးကို အပိုင်စီး အကိုပေးမောင်ယူထားတဲ့ယောက်မကို စိတ်ပူရှာပုံများ "အိုကေ ဘိုင့် ဘိုင့်" တဲ့။ နောက်တစ်ယောက်က SGကို ရောက်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းအရင်းကြီု အောင်ကြီးက မပြန်ခင် နှုတ်ဆက်တာ။ SG ကိုလာတဲ့ ၁ပတ်အတွင်း အောင်ကြီးခမျာ မနားရဘူး။ ရန်ကုန်မှာ အလုပ်လုပ်ရတာထက် ပိုပင်ပန်းတယ်။ သူ့ ကုမ္ဗဏီက ဝယ်ခိုင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေ လိုက်ဝယ်နေရတာနဲ့ တွေ့တောင် မတွေ့လိုက်ရဘူး။ ဧည့်ဝတ် မကျေလိုက်လို့ so sorry ။ Tan Tock Seng မှာ ဆေးရုံတက်နေတဲ့ မလဲ့ကို သွားကြည့်ဖို့ ပြင်နေတဲ့ မကြီးကို လှမ်းဖုန်းဆက်ရတယ်။
လူနာတင်ယဉ်နဲ့ SGH ရဲ့Immergency & Incident Wardကို ရောက်သွားပြီ: ECG ၊ X ray ရိုက်။ မနက်ကတည်းက Soya Milk တစ်ခွက်ပဲ သောက်ထား သွေးလှူပြီးတော့လည်း ဘာမှမစားရသေးခင် မူးလဲလို့ ဗိုက်ကဆာလာ။ Nurseကို အကူအညီတောင်းပြီး ရှေ့ မှာစောင့်နေတဲ့ မကြီးဆီက Biscuits လှမ်းတောင်းရတယ်။ ခေါင်းမူးလား အန်ချင်လား တချိန်လုံး လာမေးနေတယ်။ ခေါင်းမမူး မအန်ချင် အားလုံးမှတ်မိတဲ့အတွက် တိုင်ပင်ပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်က CT scan အစား Skull scan ပဲ ရိုက်မယ်တဲ့။ ၈ နာရီ Observation Room မှာ စောင့်ကြည့်မယ်တဲ့။ ပါရာစီတမော လာတိုက်တယ်။ မယဉ်စုနဲ့အဲအဲတို့ သာ မရှိရင် တော်တော်အားငယ်မှာပဲ မကြီးရောက်လာပြီ: အပြင်မှာ စောင့်နေ Observation Room ထဲ ရောက်လာပြီး စန်းထွန်းရဲ့အားရပါးရ စားသောက်နေတဲ့ပုံကို မြင်တော့မှပဲ စိတ်ချလက်ချ ပြန်သွားကြတော့တယ်။
စန်းထွန်းကတော့ အနာရှိန်ကြောင့် အိပ်လို့ ကောင်းတုန်း။ မကြီးခမျာ ထိုင်စရာ ခုံမရှိလို့ ခုတင်ပေါ်မှာ
ထိုင်ရင် အပေါက်ဆိုးတဲ့ နီငရိုးကုလားမကြီ:က မထိုင်ဖို့အပြင်မှာ သွားစောင့်ဖို့ ပြောတယ်။ ရှေ့မှာလည်း အိမ်မှာချော်လဲ ခေါင်းဆောင့်မိလို့ စောင့်ကြည့်နေတဲ့ အဖွားကြီးမှာ လေးယောက်တောင် ထိုင်နေတာကို ဘာမှမပြောဘူး။ ဘာမဟုတ်တဲ့ အလုပ်သမားက လာပြောတာ တော်တော်ခံရခက်တယ်။ ဝေနဲ့ ကိုဘုန်း လာတော့လည်း မထိုင်ဖို့ပြောတယ်။ မတ်တပ်ရပ်ပြီး ဘယ်လောက်ကြာကြာ ပြောနိုင်မှာလဲ။ လူမမာဆိုတာ စကားပြောနေမှ သက်သာတာ။ သူ မဖြစ်ဘူးတော့ ကိုယ်ချင်းလည်း မစာဘူး။ Feedback တောင်တော့ ခုံတွေမရှိတာ အဆင်မပြေဘူးလို့ ပေးခဲ့တယ်။
ညစာလာကျွှေးတော့ လက်တဖက်က သွေးလှူထားလို့ ရောင်ပြီး မြှောက်ရင်နာ နောက်တဖက်က လိုအပ်ရင် ဆေးသွင်းဖို့ အပ်သွင်းထားလို့ မကြီးက ခွံ့ ကျွှေးရတယ်။ ဘေးက အန်တီက စားနေတုန်း အမောဖောက်လာလို့ မကြီးက ဆရာဝန် ပြေးခေါ် ။ သူက CPP လို့ ရေးထားတယ် ။ စန်းထွန်းနဲ့ရှေ့ က အဖွားကြီးက တူတယ် Nursing တဲ့။ စက်က တီတီ ထအော်တယ် ။ Blood Pressure ကျသွားလို့တဲ. ဓာတ်ဆား ၁ပုလင်း လာချိတ်တယ်။ ပျင်းရိငြီးငွေ့ဖွယ်ကောင်းလှတဲ့ နာရီတွေကို ည ၁၀ နာရီ ကျော် မှာ Skull scan အဖြေကို လာပြောပေးတယ့် ဆရာဝန်က အဆုံးသတ်လိုက်တယ်။ ဘာမှ မထိခိုက်လို့ ဆေးရုံက ဆင်းနိုင်ပြီတဲ့။ MC ဘယ်နှစ်ရက်ယူမလဲ မေးတော့ ၁ရက်ဆို ရပြီလို့ ။မကြီးပြန်လာတော့ ဘာလို့ MC များများမယူတာလဲ၊ ကွန်ပျူတာ၊တီဗီ အကြာကြီး မကြည့်ရဘူးလို့ မှာလိုက်တယ်။ သူလည်း စိတ်ပူတာ အရမ်းပဲ။ ဦးနောက်ထိခိုက်မိရင် မလွယ်ဘူး။ skull scan အဖြေရမှပဲ ရယ်နိုင်တော့တယ်။
အိမ်မှာနေတုန်းက အကောင်း။ ရုံးရောက်တော့ Codingတွေ မြင်တာနဲ့ခေါင်းကိုက်လာလို့ MC ၃ရက် ထပ်ယူပြီး နားနေရတယ်။ HSA က ပေးလိုက်တဲ့ Iron ဆေးတန်ခိုးကြောင့် ခဏခဏ ဗိုက်ဆာပြီး ခဏခဏ ဝါးတီးနေတယ်။ ရေများများသောက်လို့ ၁နာရီ ၁ကြိမ်လောက် အိမ်သာနဲ့ဘီးစီးနေတယ်။ ခေါင်းက တည့်တည့်အိပ်ရင် နာလို့ စောင်းအိပ်ရတယ် ။
စန်းထွန်းအဖြစ်ကို ကြားတော့ ရုံးက Winarto တယောက် ရီတာ ရပ်လို့တောင် မရဘူးဆိုဘဲ။ Navya ကလည်: "စန်းထွန်းနော် သွေးတစ်ပုလင်း လှူတယ်နော်။ နှစ်ပုလင်း ပြန်သွင်းရရင်နော် ရယ်မှာနော်။" လို့ ခေါင်းလေး တခါခါ ပြောလာတော့ ရယ်ရခက် ပြုံးရခက်။ "ခေါင်းနဲ့စတီးဘားနဲ့ ဆောင့်မိအောင် နင်က ? လား"လို့ ပြောခံရအောင် နောက်တခါ မူးလဲရင် ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကို အရင်ကြည့် ထိခိုက်မယ့် ဆောင့်မယ့် အရာတွေ မရှိမှ မူးလဲပါ။ ၆၀၀ ကျော် ကျတဲ့ဘီလ်ကို HSA က ပေးပါတယ်။ တော်သေးတယ် HSA အပြင်မှာ မူး မလဲလို့ ။ အဲလိုဆိုရင် ဘီလ်ကို ပေးမှာ မဟုတ်။
ဒီလိုအဖြစ်မျိုး မကြုံရအောင် ဘလော့ဖတ်သူ မိတ်သဟာများလည်း သွေးလှူပြီးရင် ခဏလဲပြီူ နားနေပါ။ ရေများများ သောက်ပါ။ အစားစားပါ။ ပြီးရင် အိမ်ပြန်နားပါ Shopping မထွက်ပါနဲ့ ။
"သွေးလှူ၍ အသက်ကယ်ပါ" ။ ဒါပေမယ့် စန်းထွန်းလို အဖြစ်မခံပါနဲ့ ။